Ndiri Kusiya Basa Rakanaka uye Kuenda kuSocial Media | Martech Zone
Ndiri Kusiya Basa Rakanaka uye Kuenda kuSocial Media
Mugovera, October 4, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Gore rekupedzisira randakagara naro Patronpath chave chiri chinotenderera chinotenderera chinomhanyisa kukwira. Iyo kambani iri mukukura kukuru kukura uye kubudirira zvakanyanya!
Takunda iyo Techpoint Mira mubairo.
Isu tapedza kuvandudza kwe4 Pos kusangana - Micros, POSitouch, Comtrex uye Aloha.
Isu takagadzirisazve mushandisi interface kuti tiwedzere kutendeuka kwevatengi vedu. Isu takawedzera redundancy uye chengetedzo maficha kune chishandiso.
Isu takatokanda muRestaurant Nzvimbo saiti edu mazhinji-mayuniti macheni.
Chishanu ndiro raive zuva rangu rekupedzisira pa Patronpath. Zvaive zvakaoma kusiya kambani iyo yandakadurura moyo wangu nemweya mukati uye ine rutsigiro rwemari rwevamwe vevakanyanya budirira Internet makambani in Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Indianapolis.
Handina kana kukahadzika kuti ndakasiya kambani mune chimiro chakakura. Chandinongonetsekana chete ndechekuti varidzi vemari vakanaka here kana kuti kwete. Chikonzero chakakosha nei ndakaenda kuPatronpath ndechekuziva timu yavo yekudyara - inoumbwa nevamwe vevamabhizimusi veInternet vakanakisa mudunhu iri. Chinhu chekupedzisira chandaida kuita kuvasiya mushure mekubudirira kwakawanda. Ndicharamba ndichiyambira nekubatsira Patronpath pese pavanenge vachindida, kuona kuti kuenda kwangu hakukanganisa kubudirira kwavo.
Kukura uye mhedzisiro zvaive zvechokwadi zvakakosha paPatronpath. Ndakave nemukana wekushanda nevamwe vanhu vasinganzwisisike. Takashanda mamwe mashura pagore rapfuura nezvishoma zviwanikwa. Ndinodada nezvatakawana.
Kushanda neWorld Class Vanhu
Kwemwedzi mitanhatu yekupedzisira kana zvakadaro, ndakave nemufaro wekushanda naMarty Shiri - mumwe munhu wandaiziva kubva pamazuva angu ekutanga ku ExactTarget asi handina kumbobvira ndawana mukana wekushanda pamwe chete. Marty mushambadzi anoshamisa ane hunyanzvi hwekuvaka epasi-kirasi kushambadzira zvirongwa kubva pakutanga.
Marty akapinda muPatroni kuti atore chirongwa chitsva chenyika cheemail chatichangobva kusaina mubatanidzwa wemadhora mabhiriyoni. Mukati memazuva maviri, akafunga chirongwa ichi. Mukati memavhiki mashoma, akavaka chirongwa uye kuita kutenderera chirongwa ichi. Iye zvino chirongwa ichi chiri kuramba chichikura uye chichitumbuka pasi pehutungamiriri hwake. Akanaka sei mukomana! Chisinganyanyo kuzivikanwa chokwadi, Marty zvakare nyanzvi yemakanika ine kuda kweAudi TT.
Vamwe vese vechikwata vaive vakanaka zvakare. Mark Gallo naChad Hankinson vaishamisa kushanda pamwe nevehunyanzvi uye pachedu. Ivo vaviri maKristu makuru akabatsira kundiraira kuburikidza nemamwe matambudziko. Ndine chikwereti kune vese. Ivo zvakare vane Account Management timu vari vakatsiga varwi vakazvipira kubatsira vatengi vavo kubudirira. Ini ndakatanga kushanda naTammy Heath kwenguva zhinji yegore uye iye aishamisa, achikwenya vazhinji vevatengi awa imwe neimwe uye achiri kugona kuburitsa.
Padivi rakaoma gore rino raive nezvinodiwa zvebasa racho uye nemabatiro andakaita pfungwa dzangu dzese. Iri blog rakatambura sezvakaita kucherechedzwa kwandakakwanisa kupa zvangu PET zvirongwa. Kuva parunhare kwakandikwevera kure kubva kumatunhu enetiweki zviitiko, futi. Nguva dzisingawanzo dzandakauya nadzo, vanhu vakavhunduka!
Kutyaira kubva kuchamhembe kweIndy chaive chinhu chandaikoshesa pakutanga, asi sezvo mitengo yegasi yakakwira uye mwanasikana wangu aida ini kumba zvakanyanya, maawa mashoma pazuva munzira akatanga kukuvara chaizvo. Ndinotenda Mwanakomana wangu - uku uchikwenya mutoro wakazara pa IUPUI pamwe nekudzidzisa pachivande uye muMath Assistance Center, achiri kuwana nguva yekutora Katie kuenda nekudzoka kuzviitiko nekumuwanisa chikafu. Ndinotenda nekuda kwevana vangu vanoshamisa!
Kutungamira kuCompendium Blogware
Saka… Chris Baggott paakadaidza kubva Kuumbiridza Blogware ndikati panogona kuve nemukana wekushanda navo, ndakafara! Compendium Akatanga naChris uye ini tichishanda pakupera kwevhiki kumashure muna 2006.
Ndakagara neExactTarget uye Ali Sales akauya. Hutungamiri hwaAli pamwe nechishuwo chaChris chakawedzera kambani kuita chinoshamisa Corporate Blogging chikuva. Ini ndakachengetedza hukama hwepedyo nekambani pamusoro pegore rapfuura uye nekuparidzira chikuva. Isu tangounza kambani yemagweta Bose McKinney mwedzi wapfuura uye vatotaura kuti varikutaurisa yakakura Injini Inotungamira yatove!
Muvhuro, ini ndinotora mabasa se Mutevedzeri weMutungamiriri weBlogging Evangelism paCompendium. Ini ndichave ndichiudza Ali uye ndichibatsira edu ese zvikwata uye vatengi kudzidzisa, evhangeri, otomatiki, kubatanidza, nezvimwe. Basa rangu nderekubatsira mukumutsa vatengi nekukurumidza uye kuvabatsira kuti vawedzere zvizere chikuva kuti vawedzere kukanganisa kwavo mukati mavo kushambadzira kuedza. Icho chinzvimbo chakaoma kuramba kuti upe basa rangu makore mashoma apfuura. Ini zvakare ndichave ndichishanda pasi paCircle muIndy zvakare, saka ndine chokwadi chekuti ndinomhanyira mune vakawanda vekare vandinoshanda navo!
Kufunga kuti zvese zvakatanga naPat Coyle uye ini ndichiverenga Kukurukurirana Wakashama makore mashoma apfuura anoshamisa zvinoshamisa.
Nezvo, ini ndine chikwereti chekutenda Robert Scoble uye Shel Israeri zvekunyora bhuku rakandikurudzira kuti nditange rangu bhurogu uye ndikachinja mafambiro andaida kutora munyika yekutengesa! Zvekuti ini ndiri kutora chinzvimbo muSocial Media panguva yekumwe kudonhedza kweupfumi munhoroondo yenyika inotaura zvakanyanya kune simba reiyi svikiro, haadaro here?
Kushambadzira Analytics 101: Ndiratidze Iyo Mari!
Gumiguru 4, 2008 na5: 10 PM
Makorokoto Doug! Tarisira kunzwa zvese nezvebasa idzva!
Zvakanakisa kubva mhiri padziva,
Gumiguru 4, 2008 na5: 13 PM
Idzo nhau dzinoshamisa VaVP, changamire, hukuru hwenyu!
Godspeed kwauri nemhuri yako.
Hazvigone kunge zvakaitika kune mukomana akanaka!
Gumiguru 4, 2008 na5: 31 PM
Nhau dzakanaka, Doug! Zvaive zvakanaka kuverenga ruzivo uye nhoroondo kumashure kwesarudzo yako.
Gumiguru 4, 2008 na5: 33 PM
Makorokoto Doug. Nhau dzakanaka chaizvo uye ndatenda nekugovana nyaya yako.
Gumiguru 4, 2008 na5: 49 PM
Kugamuchirwa kune social media! Murume, neniwo ndinokuda!! Ndinodya, kufema uye kurara zvinhu izvi !! Zvakanyanya kunaka kwauri !!
Gumiguru 4, 2008 na6: 08 PM
Tichengetedze takanyora pamusoro pekubudirira kwako! Ndiri kufara kuona zvauchaunza kukambani yatove inoshamisa kudaro!
Gumiguru 4, 2008 na6: 23 PM
Doug - hongu! ndinokutendai nemashoko akanaka. Tarenda yako, shungu uye kushingaira zvinokubatsira iwe zvakanaka paCompendium - makorokoto. Mipiro yako yakakosha kuPatronpath yakagadzira hwaro hwaticharamba tichivaka pairi. Ndichasuwa kuvapo kwako muhofisi, kuzvininipisa kwako, kuravira kwako kupenga mumimhanzi (!) uye kuseka kunofadza. Kukutevera pa Twitter hakungotsiva idzo hurukuro dzemasikati dzatakaita! Chengetedza Doug.
Gumiguru 5, 2008 pa 1:07 AM
WOW!! Izvo zvinoshamisa! Ndinoziva kuti uchaita zvakanaka-chido chako!
Gumiguru 5, 2008 pa 7:26 AM
Chibvumirano chakanaka Doug!
Ini ndinorangarira uchinditaurira nezvekuita kwako neCompendium uye ndaifunga kuti ingava puratifomu yakanaka kwauri!
Zvinofadza kunzwa kuti zviri kuitika pakupedzisira!
Gumiguru 5, 2008 pa 9:58 AM
Rombo rakanaka Doug!
Inonzwika seyakakunakira iwe. Ndanakidzwa nebasa raunoita munguva yako yakasununguka pane ino blog. Zvichanakidza kuona kuti zvakamira sei kana iine pfungwa dzako dzese.
Gumiguru 5, 2008 na6: 13 PM
Iwe uchaita zvakanaka paCompendium!
Gumiguru 6, 2008 pa 12:28 AM
Zvishuwo zvakanaka kwauri, Doug. Ndine chokwadi chekuti uchaita zvakanaka negigi nyowani uye ndinoda zita idzva! (Inobata izvo zvawagara uchiita.)
Gumiguru 6, 2008 pa 5:08 AM
Waita zvakanaka, Doug!
Gumiguru 7, 2008 na2: 59 PM
Makorokoto Doug, ndangoona nhau nhasi! Yakanakisa rombo rakanaka mubasa rako idzva, zvinonzwika senge iwe neCompendium munokodzera zvakakwana.
WOW!! Izvi zvinoshamisa! Uri kuita zvakanaka paCompendium!